Momba anay - henzhen Locksmithobd Technology Co., Ltd.
Orinasa Locksmithobd dia orinasa shenzhen, voasoratra anarana any Sina ary ny adhere dia ao amin'ny distrikan'i Long Longhua, ny làlambe Long Hua, ny tranobe Tianhui, C-512. Izahay dia orinasa Shina izay misahana manokana amin'ny famatsiana ny lakilen'ny fiara sy ny fitaovana fanidiana lamba. We agents of LISHI, GOSO, HONEST, KLOM.HUK. Mpanaparitaka eran'izao tontolo izao izahay miaraka amin'ny lakilen'ny fiara lavitra sy mpivarotra.
Izahay dia mamatsy ny lakilen'ny fiara amin'ny varotra maotera sy ny mpanao biriky mandritra ny 5 taona lasa ary raha nanao izany izahay dia nanangana fifandraisana tena tsara amin'ireo mpanamboatra, mpivarotra ambongadiny ary ireo mpaninjara hafa mba hanomezana anao ny vidiny mety indrindra amin'ny fanalahidinao. orinasa any Zhejiang. Ny mpanjifa dia raisina an-tanan-droa ihany koa amin'ny tranokalanay fa mangataha torohevitra matihanina raha misy fisalasalana amin'ny ampahany mifanentana.
Fisoratana anarana:Tsy takiana ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay fa ny mpanjifa raharaham-barotra dia tokony hisoratra anarana mba hahazoany tombony amin'ny vidiny ambongadiny. Ireo mpanjifan'ny orinasa dia afaka misoratra anarana eto - http://www.locksmithobd.com/my-account/
Fandoavana:Manaiky ny fandoavam-bola amin'ny GBP, EUR ary USD izahay. Manaiky Visa, Matercard ary union union andrefana izahay, famindrana banky T / T. Manaiky ny fandoavam-bola koa izahay amin'ny alàlan'ny famindrana banky iraisam-pirenena na PayPal (mety hisy ny sarany). aza adino ny mandoa ny saram-p papa azafady.
Fandefasana:Manolotra safidy maoderina sy maneho fandefasana manerana an'izao tontolo izao izahay. Ampiasainay ireto orinasa mpandefa iraka manaraka ireto hanafoanana ny baikonao: China Post, DHL, TNT ary FedEx. Ny vokatra dia hahatratra ny ankamaroan'ny firenena ao anatin'ny 7 - 14 andro.
Miverina:Ny mpanjifa dia afaka mamerina vokatra vaovao sy tsy ampiasaina ho an'ny famerenam-bola (tsy manilika entana entana manokana) ao anatin'ny 7 andro. Tsy azonay ekena ny fiverenan'ny fanalahidy nendahina kaody na notapahina ho isan'ny chassis satria namboarina mba hanafatra ireo vokatra ireo. Ny vokatra tsy salama dia azo averina amin'ny famerenam-bola fa tsy hamerina izay vokatra tsy mandeha noho ny namoahanao azy izahay.